I-Chloe luxury beachfront efulethini - I-Airbnb
I-Chloe luxury beachfront efulethini
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Steve
I-Chloe luxury beachfront apartment (amagumbi okulala ama-2, ama-55m2, alala kufika ku-5). I-Chloe iyifulethi elingasogwini, elihlanganisa indawo yokuhlala enohlelo oluvulekile, indawo yokudlela nekhishi enezicabha ezigcwele zegceke eliholela kuvulandi omkhulu onokubukwa okumangalisayo kwe-Ithaka, itheku laseSami, kanye nolwandle oluncane olungaphansi.
I-Chloe luxury beachfront apartment (amagumbi okulala ama-2, ama-55m2, alala kufika ku-5). I-Chloe iyifulethi eliklonyelisiwe (i-TripAdvisor award of excellence), ehlanganisa indawo yokuhlala enohlelo oluvulekile, yokudlela nekhishi eneminyango egcwele evulandi eholela kuvulandi omkhulu onokubuka okumangalisayo kwe-Ithaka, itheku laseSami, kanye nolwandle oluncane olungaphansi.
I-balcony ifakwe itafula lokudlela nezihlalo, isambulela esikhulu kanye nezihlalo zedekhi noma izindawo zokuhlala zelanga. Kule ndawo ehlotshiswe kahle kunosofa omkhulu wekhona (ongasetshenziswa njengombhede ophindwe kabili ohlalisa abantu ababili abengeziwe), isitulo, itafula lekhofi, isistimu ye-mini stereo, itafula lokudlela elinezihlalo ezi-5 ezifanayo kanye neziko elikhulu lemabula. Ikhishi lifakwe ngendlela emangalisayo isiqandisi/isiqandisi esigcwele, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, i-toaster, umenzi wekhofi, umshini weNespresso, ihobhu ye-SMEG nohhavini, i-chinaware, i-glassware, izitsha zokupheka, amabhodwe, amapani nezinto zokusika. Kukhona negumbi lokulala eliphindwe kabili elihlukile elinekhabethe lezibuko eligcwele usayizi, i-TV kanye nombono omuhle olwandle ngokusebenzisa iminyango emikhulu ye-patio. Igumbi lokulala elilodwa linekhabethe elifakiwe futhi linehhovisi elincane lasekhaya. Amakamelo okulala afakelwe omatilasi be-Cocomat abasha. Indlu yokugezela iza neshawa ye-hydromassage, i-hairdryer, umshini wokuwasha kanye nezinsiza zokugeza.
Kanye nokuthola ubhasikidi wokwamukela ngesihle izivakashi zethu zithola i-WiFi yamahhala. Wonke amafasitela anamanethi omiyane abaslayizayo futhi wonke amagumbi ane-air conditioning ukuze ukhululeke. Kuhlinzekwa umshini wokomisa izinwele, kanye ne-ayina nebhodi loku-ayina. Umbhede, isihlalo esiphezulu kanye nobhavu wokugeza izingane kuyatholakala uma ucelwa. Amathawula namalineni afakiwe. Akukho ukubhema noma izilwane ezifuywayo ezivunyelwe ngaphakathi. Indawo yokupaka mahhala. Ukubhema kuvunyelwe ngaphandle kwefulethi kuphela. Ngena isikhathi ngemva kuka-14:00. Isikhathi sokuphuma kuze kube ngu-10:00. Ngesikhathi sokulala (15:00-17.30pm) umsindo kufanele wehliswe. I-swimming pool izovulwa ekuqaleni kuka-April futhi izovalwa ekupheleni kuka-Okthoba.
Itholakala edolobhaneni elincane laseKaravomylos, eduze kwechibi elinendawo yokugaya amanzi, ngaphambi nje kosebe lolwandle oluncane olunamatshe amancane (30m ukusuka efulethini) futhi phakathi nohambo lwemizuzu eyi-10 kunolunye ugu oluhlelekile. Ifulethi linokubuka okuhle kakhulu kolwandle ethekwini laseSami nase-Ithaka futhi okuwukuphela kwento umuntu angakuzwa umsindo wamanzi acwebile acwebile oLwandle lwase-Ionian ogwini lolwandle olunokuthula elinezihlahla ezinkulu zikagamthilini phambi kwefulethi. Ayikho imoto edingekile njengoba ibekwe ebangeni lokuhamba ukusuka ethekwini elidumile laseSami ngaphandle uma ufuna ukuhlola sonke isiqhingi. Ilungele imindeni nabashadikazi abajabulela imvelo & abafuna ukuzola nokuphumula endaweni enobungane. Le ndawo isendaweni ekahle yokuhlala eKefalonia, ngoba imaphakathi nesiqhingi. Le ndawo izungezwe amathaveni amancane, izindawo zokudlela, izitolo ezincane, isonto kanye nesitolo sokubhaka. I-Karavomylos iqhele ngamakhilomitha angu-1.5 ukusuka echwebeni eliphithizelayo laseSami elinezikebhe ezivamile ezixhuma ezweni laseGreece, i-Ithaka ne-Italy. E-Sami, umuntu angathola futhi ikhemisi, ibhange, isibhedlela esincane, njll. I-Karavomylos inamathaveni esintu (lena ebangeni elingu-50m). Phakathi nebanga lokuhamba kukhona imakethe encane nebhikawozi eduze kwefulethi. I-Melissani ichibi lomhume liqhele ngamamitha angama-500 kuphela kanti umhume waseDrogarati onama-stalactites nama-stalagmites ungamakhilomitha angama-3.5. Eduze kwefulethi kukhona izinkantolo zethenisi, kanye nenkundla yebhola lomnqakiswano kanye nenkundla yebhola.
I-Kefalonia iyisiqhingi esikhulu kunazo zonke futhi esihle kunazo zonke sase-Ionian. Kuthonywa kakhulu abantu abadlula khona njengamaVenetians, French and British. Inikeza imisebenzi ehlukahlukene efana nemidlalo yasemanzini eyeqisayo, izinkambo eziqondisiwe, uhambo losuku lokuya kuzo zonke iziqhingi zase-Ionian, ukudoba, i-snorkeling, ukugibela amahhashi, ukunambitha iwayini, ukuqashwa kwesikebhe esizimele kanye ne-yacht, ukugibela izintaba nokuhamba ngebhayisikili. Inesiko elihlukile, ukudla kanye nezakhiwo kanye nezimfihlo eziningi ezifihliwe. Izihlahla zomnqumo eziwudedangendlale, izindawo zokubalekela izintaba, amanzi acwebile, imigwaqo ebukekayo kanye nezindawo zokudlala zendabuko. Kuyakumangaza ngamabhishi abukekayo, amanxiwa aseRoma, imigede emangalisayo, amasonto aseByzantine, izindawo zaseHomeric kanye nezinqaba zaseVenetian. I-Kefalonia isakazwa ngama-taverna amahle ngokumangalisayo (mhlawumbe ukudla okungcono kakhulu owake wakudla eholidini). Ungathola futhi izindlela zokuhamba ezinamanzi agelezayo ngaphakathi kwezintaba, izindawo zokubuka izinyoni nezivini ezinamawayini amahle kakhulu. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi i-Kefalonia izokunikeza ukunambitha ukuthi iyini i-philoxenia (ukungenisa izihambi) yesiGreki. Inhloko-dolobha yaseKefalonia yi-Argostoli ku-27km. Ibhishi laseMyrtos elidumile liqhele ngamakhilomitha angama-20 ukusuka endlini, isikhumulo sezindiza i-37km ne-Agia Efimia 6km kanye nedolobhana lolwandle laseFiskardo elingamakhilomitha angama-35.
Ungase ube nentshisekelo yokuqasha esinye isakhiwo kumnikazi ofanayo. Amafulethi amahlanu amahle amasha, angaphambili olwandle, akalwe kahle kakhulu, amafulethi okunethezeka afakwe futhi ahlonyiswe ngamazinga aphezulu. Amafulethi i-Aelia (76m2, ilala abantu aba-5), i-Dioni (58m2, ilala kufika ku-4), i-Zoe (130m2, ilala 6), i-Chloe (55m2, ilala kufika ku-5) kanye ne-Ioli (48m2, ilala kufika ku-4), etholakala eduze kwechibi le-Karavomylos, inombono omuhle wolwandle, indawo yokubhukuda, itheku laseSami nasezintabeni eziluhlaza.
Inombolo yepholisi: 00000082990